ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်း ‌ငွေစက္ကူ ၏ နိမိတ်ပုံအဟောနှ င့် ကြီးပွါးလာတော့ မည့် မြန်မာနိုင်ငံ – Shwewiki.com
ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်း ‌ငွေစက္ကူ ၏ နိမိတ်ပုံအဟောနှ င့် ကြီးပွါးလာတော့ မည့် မြန်မာနိုင်ငံ
၂၀၂၀ ဇန် နဝါရီလ (၄)ရက်နေ့ တရားဝင်ငွေကြေး အဖြစ်သုံးစွဲ မည့် တစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူ သ င်္ကေတ နိမိတ်ပုံအကြောင်းမဟော ပြောမီ ယခင်ဟောပြောခဲ့ သည်များမှ သာဓက တစ်ခုကို တင်ပြလိုပါတယ်။-၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ တွင်ကိန်းဝပ်ဆံပါယ်လျက်ရှိသည့် မဟာမြတ်မုနိဘု ရားကြီးဝန်းရှိ တံခွန်တိုင် မီးခ တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ် ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရား ဇရပ် ကျောင်းကြီး နန်းပြ သာဒ် တံခွန်စတဲ့ အ ဆောက်အဦး တွေ မီးခ ခြင်းသည် အယူတော် မင်္ဂလာ ပညာရပ်အလို ( ဘဝေါ)နိမိတ် ဟုယူဆကာ တိုင်းရေး ပြည်ရေး နိူင်ငံ့အရေးကို ဟောဆိုကြပါ တယ်။ထို့ကြောင့် တံခွန်မီးခခြင်း နှင့်အတူ ဟော့လာသော
အ ကြောင်းတရားများကြောင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲ့ အ ထင်ကရ မြို့ များ ခြောက်ကပ်ရခြင်းများ၊ ရခိုင်ပြည်သူများမြေဇာပင်ဖြစ်ကြုံရခြင်းများဖြစ်မည့်အကြောင်းကြိုတင် ဟောပြောမှန် ကန်ခဲ့ပါတယ်။-အဘယ်ကြောင့် ဟော ပါသလဲ ? အတိတ်ဖြစ်ရပ် သမိုင်းအကိုးကား ကို ပြန်လည် နှိုင်းညှိပြီး ဟော ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုယူဆပါသလဲ?ဒီ ဇင်ဘာ(၃၁)ရက် ဟာ သမိုင်းတွေ ထဲမှာ ထူးခြား တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကြုံခဲ့ပါတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်ထဲမှ နှစ် ခု ကို စဉ်းစားမိပါတယ်(၁)ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်တော် အခါက ဒီဇင် ဘာ လ (၃၁)ရက်နေ့မှာမဟာသမ္မတရာဇာမင်းလက် ထက်မြောက်ဦး နန်း တော်ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။(၂)မြန်မာတို့၏ ရတနာပုံနေ ပြည်တော် နှင့်အချုပ် ခြာ အာဏာ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလန်ဘုရင် မကြီးထံ နှစ်သစ်ကူးလက် ဆောင်ပေးသောနေ့ဟာ ဒီ ဇင်ဘာလ(၃၁)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။တံခွန်မီးခ တဲ့ ဖြစ်ရပ် နိမိတ်ဘဝေါဟာ မန္တလေးမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ။ ဖြစ်တဲ့နေရာက မဟာမြတ်မု နိ ဘုရားကြီးဝန်းထဲမှာ မို့
အဓိက ဘုရားကြီးနဲ့ဆက် စပ် နေတယ်လို့ ယူဆ ခဲ့ပါတယ်။မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနဲ့ဆက် စပ်နေတယ်ဆိုရင် ဘုရားကြီးက ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်တော် ရခိုင်စစ်ပွဲမှာ ပင့်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်လို့ အတိတ် သမိုင်းကို အ ခြေခံကာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကို ဟောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု ငွေစက္ကူ အသစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ ထိုငွေ စက္ကူ ရုပ်ပုံ သင်္ကေတ နှင့် ဆက်စပ်သော နိမိတ် ကိုယူဆ ဟောရာတွင်လည်း ဘာကြောင့် ငွေစက္ကူ အသစ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ နိမိတ် ဘဝေါနဲ့ ဘာသက် ဆိုင်ပါသလဲ..?-ငွေစက္ကူ တစ်ထောင်တန် အသစ်မှာ ပါတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း သခင်အောင်ဆန်း ပုံ ဟာ အတော်ကြာ ကြာ ပျောက်ကွယ် နေသည့် ကြားမှ ပြန်လည်ပေါ် ပေါက်လာခြင်း—-ထိုပေါ်ပေါက်လာသော သင်္ကေတ ပုံသည် ဗိုလ် ချုပ်ဝတ်စုံ ယူနီဖောင်း မှ အရပ်ဘက်သို့ ကူးပြောင်း လာသော ပုံဖြစ်နေခြင်း–-ထိုငွေစက္ကူ သင်္ကေတ သခင်အောင်ဆန်းပုံနှင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ် စတင်ဘာလ(၅)ရက် စနေနေ့ နံနက်(၁၁.၀၀)နာရီ တရားဝင်ငွေအဖြစ်မှ ရပ် စဲ လိုက်သည့် …-၂၅ကျပ်တန် -၃၅ကျပ်တန်-၇၅ကျပ်တန် သုံးမျိုးထဲမှ ၇၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူ ပုံ ကဲ့ သို့ ဆင် တူ နေသော ပုံသဏ္ဍာန် ကိုတွေ့ ရခြင်း ထိုအချက်များကြောင့် သ ခင်အောင်ဆန်း ပုံပါငွေ စက္ကူ ပေါ် ပေါက် လာရခြင်း သည် တိုင်း ပြည်၏ အနာဂါတ် နိမိတ် ဖြစ်နိူင်ကြောင်းယူဆခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ကြားဖြတ် အမြင်ကို ပြောချင်တာက မြန်မာနိူင်ငံသည် ဗမာလူမျိုးကိုရည်ညွှန်းထားခြင်း မဟုတ် မွန် ရခိုင် ရှမ်း ကချင် က ရင် စတဲ့ လူမျိုးနွယ် များနေ ထိုင်သော နိူင်ငံကိုသာ ရည်ညွှန်းတယ် ဆို တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေစက္ကူအသစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ အနာဂါတ် ဖြစ်လတ္တံ သော အကြောင်း ရာ များက တော့ ….
(၁) မြန်မာနိူင်ငံသည် ဒီမိုကကရေစီ စံနစ်အဖြစ်ဆက်လက် သွားရပါမယ်…. (၂) တိုင်းသူပြည်သားများရဲ့ စီးပွားရေး ဦးမော့ လာမယ် ..။ မြန်မာ တွေ ကြီးပွား ချမ်းသာ လာ မယ်။ (၃) စစ်ယူ နီဖောင်း ချွတ် အချို့ရွေး ကောက်ပွဲမှာ ပါဝင် လာမယ်။
(၄) မင်းကောင်း အုပ်ချုပ် သူ သမ္မတကောင်း ကို ကမ္ဘာ နိူင်ငံကြီးတွေက ဦးညွှတ် လာရမယ်။နိမိတ် ဘဝေါ က ညွှန်းဆိုနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ထိုသို့ ဟောပါသလဲ? အခု ၂၀၂၀ ခု ဇန်နဝါရီလ ရီ (၄)ရက် ထုတ်ဝေ သုံးစွဲ ငွေ စက္ကူ သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံ မဟုတ်ဘဲ သခင်အောင်ဆန်းပုံဖြစ်ခြင်းကြောင့် နံပါတ် (၁) အဟောနဲ့ (၃)ကို ဟောပါတယ်။၁၉၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၅)ရက် စနေနေ့ တရားဝင် ငွေအဖြစ်မှရပ်စဲ ခံလိုက်ရသည့် ၇၅ ကျပ်တန် သခင်အောင်ဆန်း ငွေစက္ကူ ပုံနဲ့ အခု ထုတ်ဝေသည့် သခင်အောင်ဆန်းပုံချင်း ဆင်တူ နေခြင်း ကြောင့် …
၁၉၈၇ ခု ထိုသင်္ကတပုံပါ ငွေကို ရပ်စဲလိုက်ခြင်း ရဲ့ နောက် သမိုင်းနောက်ခံ မြန်မာ တွေ ဆင်းရဲ အကြပ်တည်း သေကြေ ပျက်ဆီး မှု့ ဆိုတဲ့ နိမိတ် ဆိုးတွေ ကြုံ လာခဲ့ရတယ်။ယခင်က ထိုသင်္ကေတပုံ ငွေမည်းတာ နဲ့ အခု ထို သင်္ကေတ ပုံ ငွေ ဖြူလာတာ ကိုသုံးသပ်ကြည့် ရင် ပြောင်းပြန် သဘော မို့ ပြောင်း ပြန် အဟော အနေဖြင့် အနာဂါတ် မြန်မာပြည်အတွက်ဟော လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်
(၄)အချက် အဟောက သခင်အောင်ဆန်းဆိုတာ ကျွန်ဘဝမှ သခင်ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင် ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကမ္ဘာ့အင်းအားကြီး စစ် တပ်နဲ့ နိူင်ငံတွေ ကို အောင်နိူင် ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ခေါင်း ဆောင်မြတ် ပြန်ပေါ်လာခြင်း ကြောင့် ဟောခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအတူ ဘုရားဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် … (“သာသနာတစ်ထောင် ကြာစွာဆောင် ရာဇအမောင်..) လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဓီပ္ပါယ်က သာသနာ နှစ်တစ်ထောင် ပြည့် သည်ကာလလကြာတိုင်း၊မင်းကောင်း မင်းမြတ်ပေါ်မည့်ဟု မိန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမ မြန်မာ့နိူင်ငံတော်ကို ထူ ထောင်ခဲ့သည့်
သာသနာ့ပြု ဘုန်း လက်ရုံးနှင့်ပြည့်စုံသော အ နော်ရထာ ကို ကျောက်ဖြူမင်းနှင့် မြောက် ဆောင်မဖုရားတို့မှ ၁၀၁၄ ခုနှစ် ဖွားခဲ့ သဖြင့် အခုဆိုလျင် သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ဖြစ်၍ သာ သနာ တော်နှစ် တစ်ထောင် ပြည့် ဝန်းကျင် ဖြစ်နေသည့် အတွက် မင်းကောင်းဆက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ထောင် ငွေ စက္ကူ နိမိတ် က ရည်ညွှန်း နေပါတယ်… အချို့က ကျစွာမင်းမှ စယူကြသောလည်း အနော်ရထာမှ သာ ယူသင့် အပ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော ဖြစ်ရပ်များကို ရက်အားဖြင့် ရက် တစ်ထောင် နှစ်အားဖြင့် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်မှ ၃နှစ်ကျော်ကာလ အတွင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ရုံးပတီ သီး အစိမ်း တို့ စားတတ်သူများ အ တွက် သတိပြုစရာ များ